Ngokuphelele bathathwa esimweni ngasinye, entsha futhi eyingqabavu, ishaya emhloleni, ngamabomu okuyingozi ekufezeni umgomo, ngokushesha enze izinqumo futhi ngokushesha nje Nokho Ungashintsha izingqondo zabo, njengoba isithakazelo kulokho esikwenzayo. Naphezu kwakho konke lokhu, waqala phansi washaywa lucky ngokumangalisayo imali! Ngoba wayehlale ophanayo, enakekelayo futhi unake abantu abaseduze naye. Ingubani le ndoda? Lowo wayemiselwe ukuba azalelwe ezinzima post-yimpi 1947 - unyaka sesilwane ivuliwe ikhalenda Eastern? Incola Cabana! Lokhu ubuntu agqamile impikiswano, okumele bazane kangcono.
1947 - unyaka sesilwane ezimfundisweni lasendulo?
Abantu abakhuluphele lucky ngokwanele ukuba azalelwe kulo nyaka zihlukaniswa isibindi nekhono wokuzidela. Fire Boar uhlamvu afana Knight. Ukuze ukuthi kuyahlonishwa, ezaziswayo, yebo, uthando. Ngakolunye uhlangothi, umuntu ekugcineni kufika eziningi izitha ukuthi 'usikhulula "impi yakhe olandelayo ubulungiswa. Kodwa ngisho bayayihlonipha kuye, ukuqonda izisusa Fire Boar bona, zilungele ukuxazulula le nkinga, unikezwa izithakazelo zabo, kungakhathaliseki ukuthi isitha.
Steel uhlamvu umphefumulo ezithambile
Futhi nakhu okunye ezithakazelisayo kuka-1947. Yisiphi isilwane akuyona Cabana, ungakwazi ngokuthi isikhumba obukhulu. Kodwa empeleni, umuntu azalelwa kule nkathi, lokhu akusebenzi.
Ngokuthakazelisayo, Fire Boar abasengozini sengozini. Unomuzwa umuntu futhi nakho kwawo wonke umuntu kwadingeka ayeke lapho sibhekene kushushiswa.
Lo muntu ngeke siyeke engqondweni, kodwa kuya ngobuqili, ukuthopha, ubuzenzisi ngobuqili nguye bengenamandla njengoba ingane. Lapho udumo lwakhe, yena ilahlekile iqala izaba. Unomuzwa ungakhululekile okwamanje.
Thembeka Fire Boar ngenkani, ikakhulukazi ngokuhlobene uqobo. Futhi omunye Uzalo kungaqali, ngoba uyabona ukuthi onjalo ilungelo. Ukuxegisa - lo mdlalo ayikho imithetho yayo. Nazi 1947 ngesikhathi sokuzalwa komuntu abanye! Shono imbongi UNikolai Tikhonov wabhala: 'Izipikili ziyonenza balaba bantu! "
Lokho neqondile nokuvuleka wabeletha ukuzethemba ngokweqile kubantu. Wamukela njengamaKristu eqiniso konke le ndoda yathi. Ngesikhathi esifanayo uzama ukusekela akushoyo ngamazwi amaqiniso nokuphikisana okuqinile, bekholelwa ukuthi umbono wakhe nje akwanele. Ngakho, le ndoda ngohlamvu steel uthola ingane ukuzikhohlisa kanye abanesibindi iqhawe-wasemuva.
Fire Boar - umuzwa mncane, enomusa ezithandayo. Naphezu kweqiniso lokuthi avame livela maphakathi ukuhilizisana, ulwa futhi umsindo akathandi, kungase uzame ukugwema amahlazo. Kuyinto muntu othanda ukuthula ongabubekezeleli nabulungisa.
Engxenyeni Fire Boar yesibili bative bavikelekile. Uyazi ukuthi le ndoda ngeke zingafezeki kanye "hit" langemuva ngeke. 1947 ekhalendeni empumalanga wanika umuntu azalelwa kule nkathi, ikhono ukuze uthole e ubuhlobo bomkhaya futhi emagumbini abukhali ukuze agweme izingxabano eside. Akubona bonke embuthanweni kwangaphakathi uyakwazisa letimfanelo indoda, futhi amanye ifike amkhaphele, sibambe sengozini sakhe sengqondo. Fire Boar uyabalisa yonke inkohliso enjalo, kodwa okubi ubani engabambeleli. Usipha inala, ukubekezelela ukungapheleli kwabanye. Akanawo umkhuba ukuqhathanisa ngokwami nge ubani omunye, futhi ngoba umoya wokuncintisana, isifiso ukufakazela umuntu ukuthi kukhona okushaya amanzi lapho.
Eqinisweni, kungase amanga, kodwa kuphela ukuze singathwesi ubuhlungu othandekayo iqiniso kanzima kakhulu.
imiqondo nolimi "udumo," "Umsebenzi" "Umsebenzi" futhi "1947". Yini isilwane image, baphane futhi ihloniphekile ke emelela! Iphupho wonke umqashi yesimanje kuphela. Ngempela, uMlilo Boar njalo ekhumbula kunjalo bese uyazama ezokhipha ke ngangokunokwenzeka ngokwezinjongo ezinhle.
Njengesigqila, Fire Boar wemfanelo futhi loludaba isiphelo sako okunengqondo, okwaqala maphakathi Ufaka. Njengoba inhloko yalawa esisemqoka: ngokushesha futhi ngendlela efanele nokwenza izinqumo, ukuthola ibhalansi ngakwesokunene saMandla, futhi umphumela waba ukuthi umsebenzi is run njengoba kahle ngangokunokwenzeka.
lusebenze ngenxa Fire Boar ezihambisana yinjabulo ngokomzwelo, lapho ukunemba isidingo futhi impendulo esheshayo. Good at nokufaka imibono creative ezindaweni lapho kufunwe umcabango, ukunambitheka kwezobuciko nokuqonda yobuciko.
Incola Cabana lula ukuthola kanye umuntu omusha. Abangane kwadingeka kancane, kodwa abaqotho futhi ezinikele yabo nangawo wonke umphefumulo wakhe. Ukuze bazokwenza lo msebenzi omunye umuntu uzokwenza noma ikuphi ukuzidela. Nabangani kanye nomndeni, yena uveza, eshiya kubo ilungelo unombono ohlukile. Uyakwazi adikile ukusekela umbono wabo ngaphandle kokushintsha yabo.
Lokho kusho ukuthini umphakathi 1947?
ngonyaka kabani okwamanje ngakho ukwambulwa isici futhi onekhono ubuntu njengoba ngonyaka we Fire Boar? Uzenzela kulo nyaka bazalelwa Sofia Rotaru, Tatyana Vasilyeva, Marina Neelova, u-Arnold Schwarzenegger, Olga Ostroumova, Svetlana Toma, uGlenn Klouz, Iggy Pop, Tatiana Tarasova, Stiven Kollinz, uMariya Rut, Olga Ostroumova, uVladimir titov, Natalya Varley, uJan Arlazorov, Stiven King, u-Elton Dzhon, u-Alexander Yakushev, Paulo Coelho, u-Alexander Tikhonov, Bari Alibasov, Robertino Loretti Ivan Dykhovichny, Vyacheslav Malezhik, Yuri Semin, u-Alexander Rutskoi, nabanye abaningi.
Yiziphi izinhlobo izinkanyezi? Ukuhlanganiswa izinkanyezi
Uyini Black Moon ekufundeni izinkanyezi?
U-Aritahishashita I: Phakathi nokubusa
Indawo yokudlela "Italoniya" eNingizimu Butovo: Izibuyekezo
Indlela Yokwenza "Yandex" search engine?
Kuyini Munchausen Syndrome?